Artec : Voaray lisitra avokoa ireo mampiasa finday | NewsMada
Artec : Voaray lisitra avokoa ireo mampiasa finday
Nidina ifotony niaraka tamin’ny vadintany teny amin’ireo mpandraharaha amin’ny fifandraisan-davitra finday ny Antokon-draharaha mandrindra ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra (Artec), ny 22 sy ny 23 novambra teo. Fantatra fa voaray lisitra sy fantatra avokoa ny 100%-n’ireo mpanjifa finday rehetra eto Madagasikara. Tsy miasa kosa ny 10%-n’ireo, ka naato avy hatrany ny laharany sy ny famandrihany.
Nilaza ny talen’ny fandrindrana ny tsena sy ny fiarovana ny tambajotra (DRMSR) ao amin’ny Artec, Rakotoratsimanjefy Brillant, fa tanjon’ny fanjakana, amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan- davitra ary ny fampiroboroboana ny niomerika (MPTDN), ny hanadiovana ity sehatra ity sy ny hiarovana ny vahoaka sy ny mpanjifa. Anisan’izany ny fahafahana manafaingana ny fanadihadiana lalina amin’ny alalan’ny famantarana ny mpampiasa na ny tompon’ny karatra Sims amin’ireny asan-jiolahy amin’ny endriny samihafa ireny. Toy ny fanafihana mitam-piadiana, ny fakana an-keriny, ny fampihorohoana, sns.
Nahay niara-niasa ny mpandraharaha
Nohamafisin’ny minisitry ny MPTDN, Rakotomamonjy Neypatraiky, fa azo arahina tsara amin’ny alalan’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny finday ny toerana ka manamora ny fanadihadiana.
Naneho fiaraha-miasa sy azo niresahana tsara ireo mpandraharaha amin’ny finday tamin’ity fidinana ifotony nataon’ny Artec sy ny MPTDN ity. Voahaja ara-dalàna koa ny fe-potoana tamin’ny fepetra isan-tsokajiny napetraky ny fanjakana. Hitohy amin’ny taona ho avy ity fanaraha-maso ny fampiasana ny karatra Sims ity ary hatao amin’ny fomba tsy ampoizina.
Eo am-panomanana koa, ankehitriny, ny hanara-maso ny IMEI, hanamafisana bebe kokoa ny lafiny fiarovana sy hisorohana ny halatra sy ny fivarotana finday nangalarina. Tafiditra ao anatin’ny fiarovam-pirenena sy hiantohana ny fampidirana haban-tseranana koa izany.